Safarka Mareykanka: Ku dhigista US liiska UK Amber wax micno ah ma sameyneyso
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Safarka Mareykanka: Ku dhigista US liiska UK Amber wax micno ah ma sameyneyso
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Xuquuqda Aadanaha • News • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Waxaa laga yaabaa 7, 2021
Go'aanka Boqortooyada Midowday ee ah inay Mareykanka ku dhejiso xaaladdooda amber ee dib u furista kaliya ma taageersana sayniska
Ururka Socdaalka Mareykanka Madaxweynaha iyo madaxa shirkadda Roger Dow waxay soo saareen bayaankan soo socda ee ku saabsan sii deynta maanta ee UK ee "nidaamka iftiinka taraafikada" ee safarada caalamiga ah:
Go'aanka Boqortooyada Midowday ee ah inay Mareykanka saarto xaaladooda amber ee dib u furista ma taageersana sayniska. Ku dhajinta Mareykanka xaalad amber waxay iska indhatireysaa xogta sayniska ee ku saabsan kordhinta heerarka tallaalka, heerarka infekshinka oo hooseeya iyo in Mareykanku leeyahay istiraatiijiyad sax ah oo lagu yareeyo halista.
“Mareykanku wuxuu ubaahanyahay inuu muujiyo hogaamin wuxuuna la imaanayaa miiska wada hadalada UK iyo kordhinta wadahadalka si loogu ogolaado dib u furida safarka mid kamid ah saaxiibadeena ugu muhiimsan caalamka.
"Dhaqaalaha Mareykanka wuxuu waayi doonaa $ 262 bilyan iyo 1.1 milyan oo shaqo haddii xuduudihiisa ay xirnaadaan, iyo in horay loo dhigo khariidad iyo jadwal si dhaqso loogu abuuro marinka safarka ee Mareykanka iyo UK waxay noqon doontaa mid labada dal khatar yar ku ah iyo abaalmarin sare oo dhaqaale."
Goorma ayey xeerarka cusub dhaqan galayaan?
Laga bilaabo 12.01am 17-ka May. Ilaa iyo waqtigaas dadku waa inay wataan foom cadeyn ah oo xambaarsan mid ka mid ah tiro yar oo cudurdaar macquul ah, oo ay ku jiraan shaqada muhiimka ah, waxbarashada, si ay u bixiso daryeel ama ay uga qeyb galaan aaska ama ay uga qeyb galaan isboorti caan ah.
Maxay uga dhigan yihiin safiirada cagaaran, guluubka iyo casaanka.
Liiska midabka ah ee waddan kasta uu saaran yahay ayaa qeexi doona haddii iyo meesha rakaabka ka imanaya ay u baahan yihiin karantiil.
Dadka ka imanaya waddamada liiska cagaaran waxay u baahan yihiin tijaabo hore ee bixitaanka COVID, mana u baahnaan doonaan inay go'doomiyaan gabi ahaanba markay soo noqdaan. Waa inay maraan imtixaanka PCR maalinta labaad markay imaadaan. Imtixaanada PCR waa la cayimay maxaa yeelay way ka saxsan yihiin tijaabooyinka socodka dambe.
Kuwa ka soo galaya England ee ka soo jeeda wadamada amber waxay u baahan doonaan tijaabada hore ee bixitaanka COVID, waa inay ku go'doomaan guriga 10 maalmood oo ay helaan baaritaanka PCR maalmaha labaad iyo siddeedaad. Weli way isticmaali karaan nidaamka tijaabinta-siideynta maalinta shanaad, natiijada baaritaanka diidmada ah taasoo micnaheedu yahay inay isla markaaba karantiiri karaan karantiilkooda.
Soo-galootiga ka imanaya dalalka liiska casaanka ah waxay u baahan doonaan baaritaanka ka-hor-tagga ah ee 'COVID', oo ay ku karantiilaan karantiil hudheel ah muddo 10 maalmood ah oo aan la gaabin karin, iyo inay helaan baaritaanka PCR maalmaha laba iyo siddeedaad.
Dowlada UK ayaa sheegtay in dadka aysan u safri karin amber iyo wadamada casaanka si ay ugu raaxaystaan.